२७ वर्ष पुरानो भ्रूणबाट जन्मियो बच्चा !
एजेन्सी । विज्ञानले विभिन्न प्रकारका सफलता प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अनौठा प्रकारका खोज चलिरहेका छन् ।
अमेरिकामा २७ वर्ष पुरानो भ्रूणबाट एक बालिकाको जन्म भएको छ । मली गिब्सन नाम दिइएकी यी बालिका गत अक्टोबर महिनामा जन्मिएकी भए पनि उनको जन्मको प्रक्रिया २७ वर्षअघि सुरु भएको थियो। उनको भ्रूणलाई अक्टोबर १९९२ मा सुरक्षित राखिएको थियो।
सन् २०२० को फेब्रुअरीमा आएर बल्ल अमेरिकाको टेनसी निवासी टिना र बेन गिब्सनले उक्त भ्रूण अपनाए। मलीले सबैभन्दा लामो समयसम्म सुरक्षित रूपमा चिस्याएर राखिएको भ्रूणबाट जन्मिने शिशुको कीर्तिमान बनाएकी छन्। यससँगै उनकी दिदी एमाको कीर्तिमान पनि उनले भङ्ग गरेकी छन्।
‘हामी औधी खुसी भएका छौँ,’ टिना गिब्सनले बताइन्। ‘पाँच वर्षअघि यदि कसैले मलाई एउटा होइन दुइटी छोरीकी आमा हुन्छ्यौ भनेको भए म पत्याउन्नथे’ उनले भनिन्।
कसरी भयो भ्रूण दान ?
पाँच वर्षसम्म सन्तान नभएपछि उनका आमाबुवाले संरक्षित भ्रूण दान लिएर बच्चा पाउन सकिने समाचार पढे। ‘मेरा आमाबुवाले उक्त समाचार नदेखेको भए हामी यहाँसम्म आइपुग्ने थिएनौँ,’ २९ वर्षीया टिना गिब्सनले भनिन्।
टिना एक प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका हुन् भने ३६ वर्षीय पति बेन साइबर सुरक्षा विश्लेषक हुन्। उनीहरूले नक्स्भिलस्थित न्याश्नल एम्ब्रियो डोनेशन सेन्टर (एनइडीसी) सँग सम्पर्क गरे।
कतिपय प्राकृतिक अभिभावकले त्यस्ता भ्रूणका दान दिनका निम्ति पनि छाडिदिन्छन् जसलाई गिब्सन दम्पतीजस्ता निस्सन्तान व्यक्तिले अपनाउन सक्छन्।
‘हामीले बच्चा कस्तो होला वा कहाँबाट आएको होला भन्ने बारे खासै सोचेनौँ,’ टिना गिब्सनले भनिन्। उनले एनीडीसीसँग परामर्श गरिन्। ‘हामी अलि साना छौँ त्यसैले भ्रूण रोज्दा पनि उचाइ र तौल हाम्रो जस्तै हुनसक्ने गरेर रोज्यौँ,’ उनले बताइन्।
एनईडीसीका अनुसार एमाको जन्म गराइँदा उनको भ्रूण २४ वर्ष पुरानो थियो र त्यो नै कीर्तिमान थियो। तर यो वर्ष मलीको जन्म भएपछि त्यो कीर्तिमान भङ्ग भयो। अचेल एमाले बहिनी मलीलाई निकै माया गर्छिन्।
एनईडीसीका अनुसार यसरी भ्रूणलाई कहिलेसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुनै समयसीमा छैन। आईभीएफमार्फत् विकसित भ्रूणबाट पहिलो जन्म सन् १९८४ मा अस्ट्रेलियामा भएको थियो।
बिहिबार, १८ मंसिर, २०७७, दिउँसोको ०१:०५ बजे